China 19.5 inch AIO PC Manufacures nevatengi - Shenzhen VisionVision Technology Co LTD
Imba > ese mune imwe pc ese mune imwe pc > 19.5 inch AIO PC
1. Chigadzirwa Nhanganyaya ye19.5 inch AIO PC
19.5 inch AIO PC idiki dhizaini AIOPC, huremu hushoma, yakaderera kudyiwa, iri nyore kwazvo kufamba uye inokodzera nzvimbo shoma, inogona kushandiswa kune gore terminal, yevanaeducation uye hofisi yekambani yemari.
2.Pfupi maficha e19.5 inch AIO PC
â € ¢ Slim dhizaini
â € ¢ yakaderera kushandiswa
3.Product Paramende (Rondedzero) ye19.5 inch AIO PC
Simba Adapter 36W / 48W / 60W
Yakabatanidzwa Intel® HD Graphics
tsigira Intel & reg; Atomuâ „¢/ Celeron & reg; / Apollolink / Gemini Nyanza ......
DDR3 / DDR4 SO-DIMM 2GB-16GB (kusarudza)
2.5 '' 500GB-1TB HDD / 16GB-256GB SSD (kusarudza)
Wired / Wireless keyboardï¹mouse (kusarudza)
4.Product Feature Uye Kushandiswa kwe19.5 inch AIO PC
5.Product Nhoroondo ye19.5 inch AIO PC
6.Product Kufanirwa kwe19.5 inch AIO PC
CE Fcc neRoHS vanogona kusimbiswa kuti vaone kukodzera kwavo kumisika zhinji pasi rese.
7.Deliver, Kutumira Uye Kushumira kweiyo 19.5 inch AIO PC
8. 19.5 padiki AIO PC FAQ
Tarisa kuti adapter yemagetsi netambo yemagetsi zvakabatana zvakanaka.
Inishuwarenzi iro simba bhatani rinoshanda zvakajairika.
Tarisa iyo Yese pc imwe haisi pasi pe 'kurara' kana maitiro emira nenzira.
Hot Tags: 19.5 inch AIO PC, China, yakachipa, nyowani, fekitori, inogadzira, vanotengesa